Matombo ematombo anokosha here? Nyowani nyowani 2021 - Mifananidzo mikuru
Mazhinji matombo anokosha ari zvicherwa
Chakagadzirwa nematombo anokosha
Iyo zvicherwa chinhu chinowanzoitika chemakemikari, kazhinji kristaro fomu uye isina kugadzirwa nehupenyu maitiro. Iyo ine imwechete yakasanganiswa makemikari, nepo dombo rinogona kuve uwandu hwemaminerari akasiyana. Iyo sainzi ndeye mineralogy.
Ivo vane akasiyana epanyama zvimiro. Tsananguro yavo inodzika pane yavo makemikari chimiro uye kuumbwa. Zvakajairika kusiyanisa hunhu hunosanganisira kristaro chimiro uye tsika, zvakare kuomarara, kubwinya, diaphaneity, ruvara, streak, kusimba, cleavage, kutsemuka, kupatsanura, yakatarwa giravhiti, magineti, kuravira kana kunhuwidza, radioactivity, uye kugadzirisa asidi.
Muenzaniso wezvicherwa: Quartz, diamond, corrundum, beryl,…
Izvo zvakakosha kusiyanisa pakati pekugadzira matombo, uye kutevedzera kana akaenzaniswa matombo.
Synthetic matombo ari mumuviri, optically uye makemikari akafanana nedombo rechisikigo, asi akagadzirwa muFekitori. Mune maket yekutengesa, vatengesi veMatombo vanoshandisa kazhinji zita rekuti "lab rakagadzirwa". Inoita kuti dombo rekugadzira riwedzere kutengeswa kupfuura "fekitori yakagadzirwa".
Muenzaniso wematombo ekugadzira: Synthetic corrundum, synthetic diamond, quartz yekuita,…
Mienzaniso yematombo ekugadzira anosanganisira cubic zirconia, inoumbwa ne zirconium oxide uye inofananidzwa moissanite, ayo ari maviri matombo simulants. Kutevedzera kuteedzera kutaridzika uye ruvara rweiyo ibwe chairo asi haina yavo kemikari kana chimiro chemuviri.
Moissanite chaizvo ine yakakwira refractive indekisi kupfuura dhayamondi uye painomiririrwa padivi nedimendi rakaenzana uye rakatemwa dhayamondi ine "moto" wakawanda kupfuura dhamondi.
Dombo chinhu chechisikigo, chakasimba chakabatanidzwa cheimwe kana kupfuura zvicherwa kana mineraloid. Semuenzaniso, Lapis lazuli idombo rebhuruu metamorphic dombo. Kupatsanurwa kwaro ibwe rakakosha-dombo. Chinhu chakakosha kwazvo che lapis lazuli is lazurite (25% kusvika 40%), iyo feldspathoid silicate.
Pane huwandu hwezvinhu zvakasikwa zvinoshandiswa sematombo, kusanganisira:
dombo shora, Ammolite, Bone, Copal, Coral, Ivory, Jet, Nacre, Operculum, Pearl, Petoskey dombo
Mineraloid chinhu chemamineral-chakafanana chisingaratidze kuve nekristaro. Mineraloids ine makemikari akaumbwa anosiyana kupfuura akagamuchirwa maseru emamwe maminera. Semuenzaniso, obsidian igirazi reamorphous uye kwete kristaro.
Jet inotorwa kubva pakuora kwehuni pasi pekumanikidza kwakanyanya. Opal ndeimwe imwe nekuda kwayo isina-crystalline hunhu.
Girasi yakagadzirwa nevanhu, plastiki, ...
Matombo echisikigo ari kutengeswa muchitoro chedu
Bhuruu zircon mhete